Iingcebiso zeempendulo - I-Foundation Reward Foundation
Ikhaya Iingcebiso zeempendulo
Isiseko soMvuzo sinceda ukuphakamisa ulwazi malunga nophuhliso oluphambili kwezesondo kunye nothando ubudlelwane kunye neengxaki eziziswe yi-intanethi. Senza oku ngokwenza igalelo kurhulumente nakwimicimbi yokubonisana. Eli phepha lihlaziywa ngeendaba zeziphakamiso esizenzileyo kwiinkqubo zothethwano zikarhulumente.
Ukuba ufunda nayiphi na enye ingxoxo apho iSiseko soNcedo singasinceda, nceda usilahle email.
8 December 2020. UDarryl Mead uphendule kuthethwano noRhulumente waseScotland obizwa ngokuba Ngokukhuselekileyo ngokulinganayo: Ukubonisana nomceli mngeni wamabango obufebe, ukusebenzela ukunciphisa umonakalo onxulumene nobunongogo nokunceda abasetyhini baphume. Okanye impendulo ixhase ukwamkelwa kweModeli yeNordic eScotland, njengoko kukhuthazwa ngu Imodeli yeNordic ngoku!
22 Julayi 2019. I-TRF inegalelo kwinkqubo yoyilo ukumisela imibuzo eza kusetyenziswa kuvavanyo lweNATSAL-4. Uphononongo lweLizwe lonke lweZimo eziShukumayo zeSondo kunye neendlela zokuphila sele zisebenza e-UK ukusukela nge1990. Lolunye lolona hlolisiso lukhulu lohlobo lwalo ehlabathini.
28 Januwari 2019. UMary Sharpe unikeze impendulo epheleleyo kwiKomiti yeeKomishoni eziKhethiweyo ekuphandeni ekukhuleni kweTekhnoloji yokuntywila kunye neAddive. Uphando lwenzeka kwiSebe lezeDijithali, iNkcubeko, amaJelo eeNdaba nezeMidlalo. Kuya kufuneka ipapashwe yiPalamente yase-UK kungekudala.
16 Julayi 2018. EScotland uMphathiswa wokuQala weBhunga eliCebisayo leSizwe labaseTyhini kunye naMantombazana liqalisile ngenkqubo yokumema iimpendulo zokubonisana ngemiba yabasetyhini. Umnikelo wethu wokuqala wawunamakhonkco phakathi kokuhlukunyezwa ngokwesondo kunye nokusetyenziswa kwamanyala.
6 December 2017. I-TRF iphendule kwiQhinga loKhuseleko kwi-Intanethi le-UK. Sikwathumele ileta kwiQela leQhinga loKhuseleko kwi-Intanethi kwiSebe lezeDijithali, iNkcubeko, amaJelo eeNdaba nezeMidlalo malunga nezilungiso ezicetywayo kuMthetho wezoQoqosho kwiDijithali. Isikhundla sethu kukuba urhulumente wase-UK kufuneka abambelele kwisibophelelo sakhe sokwenza izinto ezingekho mthethweni ezingekho mthethweni nakwi-intanethi. Ezona ndawo ziphambili zisusa ukufikelela kwimifanekiso engamanyala enobundlobongela kunye nemifanekiso yokuhlukumeza abantwana ngokwesondo.
11 Juni 2017. UMary Sharpe ungenise impendulo yokubonisana neSicwangciso seScotland sokuthintela nokuphelisa ubundlobongela kwabasetyhini namantombazana. Impendulo yethu ipapashwe nguRhulumente waseScotland kuyo website.
Epreli 2017. Isiseko soMvuzo sibalwe njengesixhobo esinxulumene nekhasi lethu kwikhaya Isicwangciso seNkqubo kaZwelonke kwi-Intanethi yoKhuseleko kwabantwana nabaselula epapashwe nguRhulumente waseScotland.
8 Matshi 2017. I-TRF yenze ingxelo ebhaliweyo kuphando lwePalamente yaseCanada malunga nemiphumela yezempilo yezoonografi ezinobundlobongela kubantu abancinci. Iyafumaneka apha IsiNgesi kwaye French. Ukungeniswa kwethu kukhankanywe ngu Ingxelo ephikisayo zilungiselelwe ngamalungu eKomiti yokuQinisekisa.
Fe bruwari 2017. URhulumente waseScotland umeme izimvo ezingama-100 ngekamva lekharityhulam yoBuntu kunye nezoSondo kwizikolo zaseScotland. Ukungeniswa kweSiseko soMvuzo yinombolo 3 Apha.
11 Februwari 2017. UMary Sharpe kunye noDarryl Mead bahambise umsitho woqeqesho kwi-intanethi kubantu abatsha abali-15 kwinkqubo ye-5Rights e-Young Scot kwimpembelelo ye-intanethi kubantu abancinci baseScotland. Oku kuyinxalenye yenkqubo yothethwano ekhokelele ekupapashweni kwe I-5Rights yeKomishoni yeNgxelo yokugqibela kuRhulumente waseScotland ngoMeyi 2017.
20 Oktobha 2016. UMary Sharpe kunye noDarryl Mead bamenyelwa kwi-Symposium on 'Ukhuseleko lwabantwana kwi-Intanethi: Ukuqhubeka noMdlalo' ePortcullis House, eWestminster. Umsitho waququzelelwa liqela elisebenzayo lasePalamente lase-UK kwiNtsapho, iiNkosi kunye neQela eliKhulu leNtsapho kunye neQela lokuKhusela abaNtwana ukunceda ukuhanjiswa koMthetho oYilwayo wezoQoqosho kwiDijithali ngePalamente yase-UK. Ingxelo yethu kwi-Symposium iyafumaneka Apha. Ngaphambili ku-2016 saphendule kwiintetho ze-intanethi kwiBhili eqhutywa yiSebe leNkcubeko, iMedia kunye neMidlalo.
9 Matshi 2016. I-Foundation Foundation iphendule kwisibizo sobungqina obhaliweyo kwi-Senate yase-Australia "Ukulimala okwenziwa kubantwana base-Australia ngokufikelela kwiimifanekiso engamanyala kwi-Intanethi". Oku papashwe yifom ehlengahlengiswayo ngokungeniswa kwe-284 kwaye ingaqwalaselwa ngokungena ngemvume kwi IPalamente yaseOstreliya Website.